लोकल ढिँडो बेचेर मासिक दुइ लाख भन्दा बढि आम्दानी गर्छन सुदामा र सबिना - Sudur Khabar
लोकल ढिँडो बेचेर मासिक दुइ लाख भन्दा बढि आम्दानी गर्छन सुदामा र सबिना
Sudur staff February 7, 2018 अार्थिक 0
हेटौँडा (मकवानपुर)- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित राप्ती खोला पुलको मुखमै छ सुदामा पुडाशैनीको ढिँडो पसल। राप्ती किनारको सिमलटार गाउँमा उनले ढिँडो बेच्न थालेको झन्डै ६ वर्ष भयो।
अहिले उनको ‘मकवानपुरे ढिँडो’ देशमै प्रख्यात बन्दै गएको छ। ‘ग्राहक त अल नेपाल, सातै प्रदेशको मान्छे आउँछन् तल्लो वर्गकादेखि माथिल्लो वर्गसम्मका।’ ढिँडो पकाउन रोकेर खिस्स हाँस्दै सुदामाले भने। ढिँडो पकाउँदा सधैँ एप्रोन प्रयोग गर्ने सुदामा हट्टाकट्टा छन्। श्रीमती सविना पुडाशैनी र दुईजना स्टाफ दिनभर सुदामाको साथमा खटिन्छन्।
अहिले ढिँडो खाने मान्छेको लाइन नै लाग्छ यहाँ। उनीहरुलाई बोल्नेसम्म फुर्सद छैन। स्वादिष्ट पनि भएकाले एकपटक आएका मान्छे दोहोर्याएर ढिँडो खान पुग्छन् यहाँ।
स्थानीय खोलाका माछा, स्वादिष्ट गोलभेँडाको अचार (कहिलेकाहीँ गुन्द्रुक भटमासको अचार) र सागसँग तात्तातो ढिँडो चोपेर खान मकवानपुरका मात्रै होइन अन्य जिल्लाका ढिँडो पारखीहरुसमेत यहाँ पुग्छन्। त्यसमाथि यतिसस्तो अन्त पाउनै गाह्रै छ। जम्मा १५० मा माछा र ढिँडोको स्वाद थपीथपी पाइन्छ। सुदामा भन्छन् ‘सिडियोदेखि मन्त्री, सांसद, कलाकारटोली, खेलकुदका व्यक्ति ढिंडो खान आउँछन्।’ सांसदहरु विरोध खतिवडा, ईन्द्र वानिया, राजाराम स्याङतान, कुमारी मोक्तान, सुवास ठकुरी सबैले यहाँको ढिंडो चाखिसके। कलाकार शम्भुजित बास्कोटा, चेतन सापकोटा, कोमल वली खेलकुदका युवराज लामासमेतले ढिँडोको स्वाद लिए। ‘युवराज लामा कहिलेकाहीँ परिवारसहितै आउनुहुन्छ, वरिष्ठ मान्छेहरु यहीँको ढिँडो मीठो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो सुन्दा अझै ढिँडो पकाउने हौसला मिल्छ, खुसी लाग्छ,’ सुदामाले खुसी सुनाए।
२ चैतदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘पञ्चायत’को निर्माण समूह सुशान्त श्रेष्ठ, गणेश गिरी र रवि अधिकारी मंगलबार यहाँ ढिँडोको स्वादमा रमाए। ‘यहाँको ढिँडो हामीजस्ता धेरै कलाकारको मुखमा झुन्डिसकेको छ, श्रेष्ठले भने, सुदामाको मकवानपुरे ढिँडो आफैँमा एउटा ब्रान्ड हो।’ मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ राप्ती खोलाको किनारमै छ ढिँडो पसल। ऐलानी एक कठ्ठा जग्गामा ६ वर्षदेखि ढिँडो बनाएर बेच्छन् सुदामा। महिनामा २ लाख आम्दानी उनले गाडी चलाउन चटक्कै छाडेर ढिँडो बेच्न थालेका हुन्। साउदी गएर पनि दुई वर्ष गाडी चलाएको अनुभव छ उनीसँग।
‘परिवासँग बसेर पेसा गर्न पाउँदा यही राम्रो छ, आम्दानी पनि राम्रो छ।’ उनका अनुसार १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख महिनामा आम्दानी हुन्छ। दिनमा २५ हजारमाथि व्यापार हुन्छ। खर्च कटाएर दैनिक ८ देखि १० हजार चोखो बचत हुने उनको भनाइ छ। मन लगाएर पेसा गरे विदेश जानै पर्दैन भन्ने उदाहरण सुदामाले देखाइदिएका छन्। विदेशमा भन्दाबढी कमाइ छ उनको। चलचित्रकर्मी गणेश गिरी सुदामाबाट विदेशिन खोज्ने युवाहरुले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन्।
पहिलो ५५ रुपैयाँमा ढिँडो बिक्थ्यो यहाँ। त्यो वेला माछा प्रतिकिलो १८० थियो। अहिले यही माछा किलोको ६०० भन्दामाथि पुग्यो। ‘त्यसैले माछाका कारण मात्रै १५० मा बेचेको,’सुदामा भन्छन्, ‘अझै महँगो भो जस्तो लाग्छ, तर माछाको मूल्य बढेकाले बाध्यतावश ढिँडोको मूल्य १५० पुर्‍याको।’ पहिले–पहिलो गाउँलेले मात्रै ढिँडो खाने भन्ने चलन थियो। सहरियाहरुले ढिँडो खाने थिएनन्।
अहिले सहरियाहरुको आकर्षण ढिँडोमा छ। खानपानको लापरबाहीले स्वास्थ्य समस्याहरु आउन थालेपछि ढिँडोका पारखीहरु बढ्दो छ। जुन कुरा सुदामाको मकवानपुरे ढिँडोमा देखिन्छ। ढिँडो स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक खाना हो। गाउँबाट ल्याएको मकैको पीठोकै कारण पनि यहाँको ढिँडो स्वदिष्ट हुन्छ। यहाँ ढिँडो पारखीहरुको भिड नै लाग्छ। कहिलेकाँही ग्राहकले टेबल पाउन कुर्नुपर्छ। स्टाफ नपाउने भएकाले उनी एक्लै ढिँडो पकाउँछन्। ढिँडो बनाउन निकै गाह्रो हुने अनुभव छ सुदामाको। जो पायो त्यसले पकाउनै सक्तैन। ज्यान बलियोले मात्रै ढिँडो ओडाल्न सक्छ। नत्र ढिँडोमा गिर्खा बस्छ।
‘राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा पनि वडाले सिफारिस नदिएर दोकान दर्ता गर्न पा छैन।’ उनी दुखेसो गर्छन्। उनको पसल ऐलानी जग्गामा छ। राज्यले मिटरबक्सा दिएको छ। धुरी कर सबै तिरेको छ। ट्वाइलेट बनाउन नगरपालिकाले पैसा पनि दिन्छ। तर, कर तिर्छु भनेर दर्ता गर्न खोज्दा दिँदैन। राज्यले आपूmहरुलाई अपहेलना गरेको उनी बताउँछन्। उनीहरु सिमलटार टोलविकास संस्थामा आबद्ध छन्। उनका अनुसार लगभग १ हजार १ सय घरधुरी सो टोलमा छन्। सबै सेवासुविधा दिँदा पसल दर्ता गर्न सिफारिस नै नदिएकोमा भने सुदामा ठूलो पीडा बोध गर्छन्। ऐलानी नै भए पनि पसल दर्ता गरिदिए कर तिर्न त पाइन्थ्यो भन्ने धारणा उनको छ।
भुकम्प प्रतिरोधी घर त्यो पनि सस्तो दरमा बनाउन सकिने ! जानकारी लिनुहोस
बल्ल सरकारी कर्मचारीको घैटोमा घाम लाग्दै ! प्रट्रोलियप पदार्थको सट्टा सरकारले किन्यो बिधुतिय गाडी
उपचार कोषलाई रु ५२ हजार